Douglas Karr | Peji 2 pamusoro 873 | Muvambi we Martech Zone
Chii chinonzi Swag? Inokodzera Kushambadzira Investment?
Chipiri, May 3, 2022 Chipiri, May 3, 2022 Douglas Karr
Kana wanga uri mubhizinesi kwenguva refu, unoziva chinonzi swag. Wakambozvibvunza here nezvekwakabva izwi iri, zvakadaro? Swag yaive yakanyatso kurongerwa zvinhu zvakabiwa kana kupamba zvakashandiswa muma1800s. Izwi rekuti bhegi ndiro ringangove rakabva kuslang… waisa zvinhu zvako zvese mubhegi reraundi wotiza nesag yako. Makambani ekurekodha akatora izwi mukutanga 2000s apo vaiisa pamwechete bhegi
Iwo mana Matanho Ekushandisa kana Kuchenesa CRM Dhata Kuti Uwedzere Kuita Kwako Kutengesa
Monday, May 2, 2022 Chipiri, May 3, 2022 Douglas Karr
Makambani anoshuvira kuvandudza mashandiro avo ekutengesa anowanzo kuisa mari mukuita zano revatengi hukama manejimendi (CRM) chikuva. Takurukura kuti sei makambani anoshandisa CRM, uye makambani anowanzo tora danho… asi shanduko dzinowanzo kundikana nekuda kwezvikonzero zvishoma: Dhata - Dzimwe nguva, makambani anongosarudza kurasira data maakaundi avo uye vanobatika muCRM chikuva uye data haina kuchena. Kana vatove neCRM yakaitwa,
Hunter: Maitiro ekutsvaga B2B Bata Email Kero Mumasekondi
Pane dzimwe nguva dzaunonyatso kuda kungotora email kero kuti ubate waunoshanda naye wausina mubhuku rako rekero. Ndinogara ndichishamisika, semuenzaniso, vangani vanhu vane LinkedIn account yakanyoreswa kune yako email kero. Takabatana, saka ndinovatarisa, ndinovadonhedzera email… uyezve usazowana mhinduro. Ini ndichaenda kuburikidza ese akananga meseji interfaces pane ese masocial media saiti uye mhinduro
Postaga: Iyo Yakangwara Yekuparidzira Campaign Platform Inofambiswa NeAI
Chipiri, April 26, 2022 Chipiri, April 26, 2022 Douglas Karr
Kana kambani yako iri kuita kuparidzira, hapana mubvunzo kuti email inzira yakakosha kuti iitwe. Kungave kuri kukanda munhu anokurudzira kana kudhindwa pane imwe nyaya, podcaster yekubvunzurudza, kutengesa kunze, kana kuyedza kunyora zvakakosha zvesaiti kuti uwane backlink. Maitiro ekuita mishandirapamwe ndeiyi: Ziva mikana yako uye tsvaga vanhu vakakodzera vekuonana navo. Gadzira nzwi rako uye cadence kuti uite yako
Kumera Zvemagariro: Wedzera Kubatanidzwa MuSocial Media Neiyi Kutsikisa, Kuteerera, uye Kukurudzira Platform.
Muvhuro, April 25, 2022 Muvhuro, April 25, 2022 Douglas Karr
Wakambotevera mubatanidzwa hombe pamhepo kungoodzwa mwoyo nemhando yezvavari kugovera kana kushomeka kwekubatana kwavanoita nevateereri vavo? Icho chiratidzo chekutaura, semuenzaniso, kuona kambani ine makumi ezviuru zvevashandi uye angori mashoma mashoma kana zvaanoda pane izvo zvirimo. Hufakazi hwekuti havasikungoteerera kana kudada nezvirimo zvavanenge vachisimudzira. Magiya emasocial media